Mayelana Nathi - I-Moton Technology Co., Ltd.
"Uchwepheshe wakho wesixazululo se-automation emkhakheni wokusetshenziswa."
I-Moton Technology Co., Ltd. iyibhizinisi lobuchwepheshe elisungula izinto ezintsha, ikakhulukazi eligxile ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwemikhiqizo yokuhlanganisa okuzenzakalelayo kwerobhothi emkhakheni wokusetshenziswa. Imikhiqizo yethu efakiwe, imikhiqizo yokuthengisa ehlakaniphile isetshenziswe kabanzi emazweni amaningi futhi yathola ukunconywa okuningi kumakhasimende. Okwamanje, ukutshalwa kwezimali kwethu okuqhubekayo ku-R&D kukhuthaza ukukhiqizwa okungaphezi kwemikhiqizo emisha, engangena ezidingweni zezimo ezihlukene zohlelo lokusebenza. Imikhiqizo yochungechunge lwe-MOCA ne-MOTEA njengoba imikhiqizo yethu yokuthengisa eshisayo isebenza kahle kakhulu kumasayithi, ikhombisa ikhwalithi enhle nokuzinza okuqinile. Njengebhizinisi lobuchwepheshe elihlose ikusasa, umgomo wethu ukuthuthukisa imikhiqizo ethuthuke kakhulu yerobhothi ezenzakalayo, sibona umbono wethu wokukhulula izandla zethu.
I-Moton Technology ikhethekile ku-R&D, ukukhiqizwa nokumaketha kwemikhiqizo yokuhlanganisa i-robotic automation ikakhulukazi emkhakheni wokusetshenziswa. Imikhiqizo yethu ikakhulukazi ihlanganisa i-MOCA, i-MOTEA nochungechunge lwe-MOCOM. Isitolo sekhofi irobhothi, isitolo setiye sobisi lwerobhothi kanye nesiteshi sokudayisa ukudla nesiphuzo ngokulandelana. Ngaphandle kwalokho singakwazi futhi ukukhiqiza imikhiqizo ezenzakalelayo yokuthengisa ehlakaniphile ngokwezidingo zamakhasimende. Eminye yemikhiqizo nobuchwepheshe ithole amalungelo obunikazi kazwelonke namalungelo okushicilela esoftware. Leyo mikhiqizo isetshenziswe ngempumelelo ezimeni ezehlukene njengesikhumulo sezindiza, inxanxathela yezitolo, ikolishi, iziteshi ezingaphansi komhlaba nokunye.
1. Amandla e-R&D Aqinile
2. Ithimba Lezokumaketha Laphesheya kwezilwandle elinolwazi
Amalungu ethimba lethu lezentengiso laphesheya angakunikeza ukusekela kochwepheshe namasevisi. Bonke banolwazi lokusebenza kumasayithi aphesheya anekhono elihle lokuxhumana ngesiNgisi ngokubhala nokukhuluma. Ngolwazi lokumaketha lwaphesheya kwezilwandle lwesikhathi eside, singathola imibono yamakhasimende ngokunembayo futhi sikhonze amakhasimende kangcono.
3. Ukulawula Ikhwalithi Eqinile
3.1 Ukuhlolwa Kwempahla Engenayo
Senza izinqubo eziqinile zokulawula ikhwalithi yakho kokubili impahla eluhlaza engenayo kanye nezingxenye. Yonke inqubo yokuqamba ilandela inqubomgomo yokuphatha ikhwalithi yamazwe ngamazwe ukuze kuqinisekiswe ukuqina kwesigaba ngasinye. Izinto ezingasetshenzisiwe kanye nezingxenye zizohlolwa ngabasebenzi abakhethekile ngokuya ngohlelo lokuhlola impahla engenayo.
3.2 Ukuhlolwa Kwemikhiqizo Eqediwe.
Yonke imikhiqizo eqediwe izohlolwa ngokuhambisana nohlelo lokuqinisekisa ikhwalithi (QAP) olunikezwa umnyango wethu wekhwalithi noma izinqubo zokuhlola ezigunyazwe iklayenti.
4. I-OEM & ODM Yamukelekile
Isizinda sethu sokukhiqiza sisesifundeni saseSujiatun, eShenyang, esifundazweni saseLiaoning. Indawo yokwakha yesikhungo izungeze i-20,000 sqm. Imishini yethu yokukhiqiza ihlanganisa umshini wokusika i-Italy El.En fiber laser, umshini wokugoba we-Taiwan Tailift CNC wokunemba okuphezulu kwe-CNC, umshini wokugoba we-Taiwan Tailift onembile kakhulu we-CNC, umshini wokusika i-Swiss Bystronic high power fiber laser, umshini wokugoba we-Swiss Bystronic CNC, irobhothi lokushisela i-KUKA, i-OTC irobhothi lokushisela nokunye.
Umshini wokugoba we-Swiss Bystronic Xact-160 CNC
Umshini wokugoba we-Swiss Bystronic Xact-50CNC
Germany LISSMAC Deburring machine
I-EL.EN FIBER PLUS 3015 umshini wokusika we-laser
Umshini wokubhoboza we-Taiwan Tailift VISE 1250 wokunemba okuphezulu we-CNC
Irobhothi lokushisela i-KUKA
Irobhothi lokushisela le-OTC
Ithimba le-R&D lihlanganisa onjiniyela abakhethekile bomklamo wangaphandle, ukwakheka kwesakhiwo nemishini, ukuklanywa kukagesi nokulawula, ukugunyazwa kwamarobhothi nokuthuthukiswa kwesofthiwe. Selokhu yaqalwa, i-Moton Technology inikezelwe ku-R&D nasekuthuthukisweni kokukhiqizwa komkhiqizo. Ubuchwepheshe bokulingisa obunamandla be-3D busetshenzisiwe ekwakhiweni kwesistimu yethu. Sinobuchwepheshe bezinhlelo zokulingisa be-3D obungaxhunyiwe ku-inthanethi, obungathola ukulingisa okuphelele ngaphambi kokusebenza kwangempela. Ngaphandle kwalokho, emkhakheni wokubona umbono, sihlanganyela nenyuvesi edumile yasekhaya ukuze kube lula ukuqongelela kwethu lobuchwepheshe.
I-HRD Automation Equipment Co., Ltd. yasungulwa njengenkampani yokuhweba yemishini kagesi neyokuzishintshanisa.
I-Boneng transmission Co., Ltd. yasungulwa njengokuthengiswa nokukhiqizwa kwemishini eyimishini.
Amagatsha aseNdiya naseVietnam amiswa ukuze ahlangabezane nezidingo zokwandisa ukumaketha kwamanye amazwe.
Ubuchwepheshe be-Moton buhlanganiswe ngenhla kwamabhizinisi njengoba inkampani yeqembu igxile kakhulu ku-R&D nasekukhiqizweni kwemikhiqizo yokudayisa ehlakaniphile.
Ithimba lethu liholwa ochwepheshe abavela emabhizinisini adumile aphesheya kanye nasekhaya afana ne-Siemens enokuqoqwa okujulile kobuchwepheshe kanye nesipiliyoni sokumaketha saphesheya kwezilwandle. Bangaphezu kuka-20% abasebenzi abaneziqu ze-master. Wonke amalungu eqembu agcwele intshiseko nomdlandla wokufeza okuhlosiwe.
Isiko lebhizinisi liwumphefumulo webhizinisi. Sikuqonda ngokugcwele ukubaluleka kwesiko lokubambisana futhi sihlanganisa okufanayo enhliziyweni yawo wonke amalungu eqembu, njengoba sikholelwa ukuthi ukuthuthukiswa kwebhizinisi lethu kusekelwa yilawa manani ayisisekelo. Ukwethembeka, Ukusungula, Ukuzibophezela kanye Nokubambisana.
Ibhizinisi lethu lihlala linamathela kumgomo wokuthambekela kubantu, ukuphathwa kobuqotho, ikhwalithi ephezulu kanye nesithunzi esiphambili.
Ukwethembeka sekuphenduke umthombo wangempela wokuncintisana kwebhizinisi lethu.
Njengoba sinomoya onjalo, siye sathatha zonke izinyathelo ngendlela engaguquki neqinile.
Ibhizinisi lethu lisesimeni esisebenzayo kuze kube phakade ukuze libhekane nezinguquko zamasu nezemvelo futhi lilungele amathuba avelayo.
Ukuqamba okusha kuwumongo wesiko lethu lebhizinisi.
Ukuqamba okusha kuholela ekuthuthukisweni, okuholela ekukhuleni kwamandla.
Ibhizinisi lethu linomqondo oqinile wokuzibophezela kanye nenhloso yamakhasimende nomphakathi.
Ukuzibophezela kwenza umuntu akwazi ukuphikelela.
Amandla omthwalo onjalo akakwazi ukubonakala, kodwa angazwakala.
Selokhu kwathi nhlo bekuyimbangela yokuthuthukisa ibhizinisi lethu.
Ibhizinisi lethu libheka inkampani njengomgomo obaluleke kakhulu, njengoba ukusebenza ndawonye kudala isimo sokuwina.
Ukubambisana kuwumthombo wentuthuko
Silwela ukwakha umoya wokubambisana ngaso sonke isikhathi.
Amanye Abathengi Bethu
Sihlinzeka ngensizakalo yobungcweti ngemuva kokuthengisa kumakhasimende ethu avela eChina naphesheya kwezilwandle. Isevisi eku-inthanethi inikezwa 7x24h. Uma amaklayenti edinga isevisi yasendaweni, singathumela onjiniyela bethu bensizakalo esizeni ukuze kuxazululwe izinkinga. Isikhathi sewaranti yomkhiqizo wethu ngokuvamile unyaka owodwa. Phakathi nenkathi yewaranti, sizohlinzeka izingxenye ukuze zishintshwe mahhala. Futhi singahlinzeka ngesevisi yesandiso sewaranti ngezindleko zokungeza.